Imvelo: kuyini, izici, ukuhlolwa nokunye okuningi | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Iplanethi yethu uhlelo lwemvelo olwenziwe ngezinto eziphilayo kanye nendawo ebonakalayo lapho behlangana khona futhi behlala khona. Umqondo we imvelo ifaka phakathi yonke isethi yezinto njengokungathi iphelele ngaphakathi kwemvelo. Siyazi ukuthi i-ecosystem ifana nekhaya lezinto eziphilayo eziphakathi nendawo yemvelo nokuthi inikela ngazo zonke izinsizakusebenza ezidingekayo ukuze zikwazi ukuphila, ukondla nokuzala.
Kulesi sihloko sizokutshela konke odinga ukukwazi mayelana nemvelo nezici zayo.
1 Uyini umkhathi
2 Ama-ecosystems kanye nama-biomes
3 Incazelo yemvelo yezingane
4 Imvelo nokuhlolwa
Umqondo we-ecosphere uphelele, ngakho-ke uhlanganisa isethi yezinto zizonke. Yigama elibhekisa ku-ecosystem ngendlela evame ukusondelwa kumbono weplanethi. Isibonelo, i-ecosystem yakhiwe ngomkhathi, i-geosphere, i-hydrosphere, ne-biosphere. Sizokwephula ingxenye ngayinye nokuthi yiziphi izici ezinazo:
Umkhathi: yileyo ndawo ehlanganisa yonke ingxenye ye-abiological, njengamadwala nenhlabathi. Yonke le ngxenye yemvelo ayinayo impilo yayo futhi izinto eziphilayo ziyisebenzisela ukondla.
I-Hydrosphere: ihlanganisa wonke amanzi akhona esimisweni semvelo. Kunezinhlobo eziningi zamanzi akhona noma ngabe amanzi ahlanzekile noma anosawoti. Ku-hydrosphere sithola imifula, amachibi, imifudlana, imifudlana, izilwandle nezilwandle. Uma sithatha isibonelo semvelo yehlathi siyabona ukuthi i-hydrosphere yingxenye yomfula owela ehlathini.
Umkhathi: yonke imvelo emhlabeni inomoya wayo. Okungukuthi, umoya ozungezile lapho kushintshaniswa khona amagesi akhiqizwa imisebenzi yezinto eziphilayo. Izitshalo zenza i-photosynthesis futhi zikhipha umoya-mpilo ngokumunca isikhutha. Lokhu kushintshaniswa kwegesi kwenzeka emkhathini.
Okuphilayo: kungashiwo ukuthi kuyisikhala esinqunyelwe ubukhona bezinto eziphilayo. Ngamanye amagama, uma sibuyela emuva esibonelweni semvelo yehlathi, singasho ukuthi i-biosphere yindawo yendawo yezinto eziphilayo lapho kuhlala khona izinto eziphilayo. Ingafinyelela kusuka ngaphansi komhlaba kuya esibhakabhakeni lapho kundiza khona izinyoni.
Ama-ecosystems kanye nama-biomes
Imvelo enkulu ehlanganisa imvelo ingahlukaniswa ibe yimvelo emincane eminingana okulula ukuyifunda futhi kutholakala uchungechunge lwezici ezizenza zihluke. Yize zonke ziyingxenye yamayunithi aphezulu abizwa nge-biomes, i-ecosystem ingahlukaniswa ibe iyunithi ephelele. Okungukuthi, i-ecosystem uqobo inazo zonke izidingo ukuze ikwazi ukusingatha impilo nokuthi kunokusebenzisana phakathi kwezinto eziphilayo nemvelo. I-biome iyi iqoqo lezinto eziphilayo ezinkulu ezihlanganisa izici ezifanayo futhi ezingaba emanzini nasemhlabeni.
Masithathe isibonelo sama-biomes amaningi: ngokwesibonelo singathola amaxhaphozi, amachweba, amahlathi, amashidi, izindawo zezilwandle eziphakeme, njll. Uma sikhuluma ngemvelo singakhuluma ngohlangothi olulodwa, ihlathi, njll. Kodwa-ke, ama-biomes ayisethi yalezi zinhlelo zemvelo lapho izinhlobo ezifanayo zingahlala khona.
Manje kulapho kufanele singenise umuntu ku-equationn. Abantu bahlukanisa futhi bahlukanise imvelo ukuze bayiqonde kangcono. Ungase futhi ubaxhaphaze futhi ubagcine ngokuthanda kwabo. Into eyodwa icacile, imvelo iphelele futhi kunokuxhumana okungenakugwemeka, okuhlala njalo futhi okuyinkimbinkimbi phakathi kwezinto eziphilayo nemvelo eyenza imvelo.
Incazelo yemvelo yezingane
Ngendlela elula, sizochaza ngemvelo. Kungathathwa njengokungahle kube semvelo yomhlaba lapho zonke izidalwa eziphilayo zihlobene ngqo noma ngokungaqondile. Ake sithathe isibonelo sezinto eziphilayo ze-photosynthetic. Lezi zidalwa zinesibopho sokukhiphela umoya-mpilo emkhathini futhi isebenzela ezinye izinto eziphilayo ukuzondla. Umjikelezo we-hydrological ubuye uyingxenye yemvelo ebaluleke kakhulu kuyo yonke iplanethi. Zonke izidalwa eziphilayo zisebenzisa amanzi ngoba siyawadinga ukuze sikwazi ukuphila.
Inqubo ehambisa amanzi olwandle nasemhlabeni yinto ebalulekile empilweni futhi yenzeka ezingeni lomhlaba. Lona umjikelezo we-hydrological. Ukunakekela iplanethi kufanele sinakekele imvelo futhi sizinakekele.
Okwaziwa nangokuthi i-ecosphere yisilingo esidumile esenziwa yi-NASA ngombono wokwenza imvelo engaba uhlobo lweplanethi encane. Kwenziwe umzamo wokulingisa bonke ubudlelwano phakathi kwezinto eziphilayo nezingaphili ukulingisa iplanethi yomhlaba ngosayizi omncane.
Ngaphakathi kwethulwa iqanda eli-crystal i-substrate yamanzi olwandle, enezimfanzi, ulwelwe, igorgonia, amatshe kanye namagciwane. Umsebenzi webhayoloji wenziwa ngendlela ehlukaniswe ngokuphelele ngoba isitsha sivaliwe ngamakhemikhali. Ukuphela kwento elikuthola ngaphandle ukukhanya kwangaphandle ukukwazi ukugcina umjikelezo webhayoloji nokufihla ubukhona belanga emhlabeni wethu.
Lokhu kuhlolwa kwe-ecosphere kubonwe njengomhlaba ophelele lapho imfanzi ingahlala khona iminyaka eminingana ngenxa yokweneliseka kwemvelo. Ngaphezu kwalokho, alukho uhlobo lokungcola kwemvelo ngakho-ke aludingi noma yiluphi uhlobo lokuhlanza futhi ukugcinwa kwalo kuncane. Lolu uhlobo lokulingwa oluthandekayo lokukwazi ukukuqonda lokho, inqobo nje uma ibhalansi yemvelo iyahlonishwa, konke kungaphila ngokuzwana.
Singasungula ukuqhathanisa okuthile nalokho okwenzekayo namuhla ukuze siqonde futhi sazi isidingo sokwenza izimo ezithile ukufeza nokugcina ukulinganisela kwemvelo futhi. Ngobuchwepheshe bamanje singakwazi ukukhiqiza inani elikhulu lamandla angcolisa lokho kubangela ukuthi ibhalansi yemvelo ilahleke ezingeni lomhlaba. Siphinde sicekele phansi imvelo kanye nezindawo zokuhlala zezinhlobo eziningi, okubaholela ekuqothulweni ezikhathini eziningi.
Yize isimo semvelo seplanethi yethu siyinkimbinkimbi kakhulu kunaleso sokuzama, imijikelezo yokuphila nayo ikhula ngendlela efanayo. Kunezinto ezithile eziyisisekelo ezingenelela njenge zingumoya, umhlaba, ukukhanya, amanzi nokuphila futhi konke kuhlobene. Abanye bathi i-ecosphere idalwe kusuka kumandla aholela kuzo zombili izimo ze-harmonic nezesiphithiphithi.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi ngemvelo nangezici zayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ciencia » Imvelo